१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छु्ट्टै प्रस्ताव ल्याएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि कार्यकारी अधयक्ष प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावलाई जवाफ दिनेगरी छुट्टै प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै प्रतिवेदन ल्याएपछि ओलीले पनि प्रचण्डलाई जवाफ दिने गरी प्रतिवेदन ल्याएका हुन् । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अब दुबै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने जानकारी दिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले दुबै अध्यक्षको प्रस्तावमा अर्को बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए । अर्को बैठक आगामी मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । सो बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्नेछ ।
‘युरोप पठाइदिन्छु’ भन्दै ६ लाख ठगी गरेको आरोपमा १ जना पक्राउ
सुनको मूल्य तोलामा १ सयले बढ्यो
मोबाइल खल्तीमा राख्नुहुन्छ ? बाँझोपन निम्त्याउन सक्छ !
ओलीसँग गएका २३ जना केन्द्रीय सदस्य फर्के : प्रचण्ड
चितवनमा कोरोनासंक्रमित वृद्धको मृत्यु